ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေးစီးရီး, ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး, စိတ်ကြိုက်ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေးတရုတ်ထုတ်လုပ်သူ မှစ. ကမ်းလှမ်းရန်
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေးစီးရီး,ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး,စိတ်ကြိုက်ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး,centrifugal ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ဖယ်ရှားရေး,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေးစီးရီး
ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေးစီးရီး ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေးစီးရီး, ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, စိတ်ကြိုက်ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 2000 - 50000 / Bag/Bags
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 1800 - 69500 / Bag/Bags
တရုတ်နိုင်ငံ ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေးစီးရီး ပေးသွင်း
အဆိုပါဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်းထားတဲ့လေထုဝင်ပေါက်ပိုက်တစ်ခုအိပ်ဇောပိုက်, ဆလင်ဒါ, ကန်တော့ချွန်နှင့်ပြာများဖွဲ့စည်းမှုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့် airstreams သို့မဟုတ်အရည်ထံမှသီးခြားအစိုင်အခဲမှုန်ကနေစိုင်အခဲများနှင့်အရည်မှုန်ခွဲခြားရန်အသုံးပြုသည်။ သာမန်စစ်ဆင်ရေးအခြေအနေများအရ, အမှုန်အပေါ် centrifugal အင်အားသုံး၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆွဲငင်အား၏5~ 2500 ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးများ၏ထိရောက်မှုဆွဲငင်အားဖြေရှင်းခနျးထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဒီနိယာမအပေါ်အခြေခံပြီး, 90% အထိတစ်ဦးဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးထိရောက်မှုနဲ့ဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာတစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ကလုန်း separator စက်မှုမြေမှုန့် remover အတွက်အထိရောက်ဆုံးဖုန်မှုန့် remover တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအရာအများစုကို5mu မီတာအထက်အမှုန်များ၏ဖယ်ရှားရေးအတွက်အသုံးပြုကြသည်မဟုတ်သောစေးကပ်ခြင်းနှင့်မဟုတ်တဲ့ fibrous ဖုန်မှုန့်များ၏ဖယ်ရှားရေးတို့အတွက်အသင့်လျော်သည် ဖြစ်. , အပြိုင်ပေါင်းစုံပြွန်ဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့် remover ၏ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးထိရောက်မှု၏ 80 ~ 85% မွငျ့မား3မိုက်ခရွန်ဖြစ်ပါတယ် အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အဆိုပါချေးများနှင့်လေဘွေအထူးသတ္တုထုတ်လုပ် Wear သို့မဟုတ်အခြေခံအဆောက်အဦးကြွေပစ္စည်းများလည်ပတ်မှုအခြေအနေများ, 500 * 105 Pa ၏ဖိအားပေးမှုအောက်မှာ 1000. ၏အပူချိန်မှာ 1000 ဒီဂရီ C ၏အပူချိန်မှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နည်းပညာနှင့်စီးပွားရေး၏အသုံးအနှုန်းများမှာ ဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်းဘို့ဖိအားဆုံးရှုံးမှုကိုထိန်းချုပ်အကွာအဝေးယေဘုယျအားဖြင့် 500 ~ 2000Pa ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မြင့်မားတဲ့အပူချိန် flue ဓာတ်ငွေ့ကိုစင်ကြယ်စေများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့်အလယ်အကျိုးသက်ရောက်မှု duster, ကပိုင်ဆိုင်သည်။ ဒါဟာဘွိုင်လာ flue ဓာတ်ငွေ့ dedusting, multistage ဖုန်မှုန့်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ကြိုတင်ဖုန်မှုန့်တစ်အသုံးများဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသည်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေးစီးရီး , ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , စိတ်ကြိုက်ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , centrifugal ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ဖယ်ရှားရေး , ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး၏ဈေးနှုန်း